Maoritania: Niteraka adihevitra ny famonoan’ny Al Qaeda · Global Voices teny Malagasy
Maoritania: Niteraka adihevitra ny famonoan'ny Al Qaeda
Voadika ny 28 Mey 2012 14:11 GMT
Vakio amin'ny teny English, Ελληνικά, বাংলা, Español, عربي
Nanohina ny fon'ny vahoaka Maoritaniana maro ny nahita ilay lahatsary tao amin'ny YouTube izay nivoaka [ar] tao amin'ny bilaogin”ilay Maoritaniana antsoina hoe Al Akhbar tamin'ny faha 12 Mey 12. Hita tao anatin'io lahatsary io ny famotorana nataon'ny Al Qaeda ilay lehilahy teratany Maoritaniana 40 taona. Nanendrikendrika azy ho nanao asa fitsikilovana izy ireo. Novonoina izy avy eo [fa tsy napoitra tao anatin'ilay lahatsary izany] taorian'ny nibabohany fa miara-miasa amin'ny fitsikilovana Maoritaniana izy.
Nanonona anarana mpitarika maro tao amin'ny foloalindahy sy atidoha mpiketrika izay niara-niasa taminy izy, ary nilaza izy fa izy ireo no manara-maso ny asany. Nanambara koa izy fa ny Jeneraly Mohammed Ould Makt, izay talen'ny fikarohana sy ny fanangonana tahirin-kevitra (famotorana any ivelany), no nampiditra azy tamin'io asany io.
Namoaka tatitra amin'ny antsipirihany mikasika ny famonoan'i Al Qaeda ilay lehilahy teratany Maoritaniana ny bilaogin'i Alegcom , sy ny tantaran'ny asany miaraka amin'ny fitsikilovana Maoritaniana sy ny Al Qaeda. Fanampin'izany , mitaky any fisokafan'ny famotorana mikasika ity raharaha ity ny bilaogy:
Mbola hampiditra tanora Maoritaniana izahay ary hampanao sorona azy ireo ny tenany amin'ny fiadiana amin'ireo olona ratsy saina ao amin'ny avaratr'i Mali [ao amin'io toerana io ny Maoritaniana no miady amin'i Al Qaeda]. Hatramin'izao dia sivy no nampijaliana, ary misy eo amin'ny roa ambin'ny folo eo no natosika mankany amin'ny fahafatesana, ho takalon'ny vola kely noho ny fahantrana mihatra amin'izy ireo. Lasa tsy nanam-bintana izy ireo, ary tsy nisy niraharaha ny fianakaviany na koa notolorana fanomezana izay tsy misy lanjany na dia kely aza. Manan-danja ity lohahevitra ity fa mifandray amin'ny fiainan'ny vahoaka sy ny fandriampahalemana eto amintsika, ka tsy tokony hisy zavatra hamavainina mihitsy. Ny hany azontsika atao dia ny manokatra fanadihadiana.
Nanoratra mikasika io trangan-javatra io ny bilaogin'i Al Kaashif :
Ny trangan-javatra tena niteraka korontana indrindra androany dia ny tantaran'io tovolahy mahonena io izay nino fa nanana firenena mendrika ny hanaovana sorona ny tenany, nanaiky hatrany ny fifehezan'i Jeneraly Mohammed Ould Makt, izay naniraka azy ho any amin'i Mazaoro Ahabibi Ould Al Dalool. Nisahana andraikitra maro io tovolahy io ho fanompoana an'i Maoritania, nampita antontan-taratasy manan-danja talohan'ny nahatratraran'i Al Qaeda azy, izay naka sary sy feo ny famotorana azy, ka nahafantarana ny pitsopitson'ny asa aman'andraikiny rehetra izay nataony ho an'ny firenena kanefa tsy nahazoany ny fiarovan'ireo olona nampiasa azy akory izany, talohan'ny namonoana azy, araka ny hevitr'i Al Akhbar.
Nilaza ny fomba fijeriny i Mohamed Abdo, olona mafana fo iray:
Milalao ireo tovolahy vao erotrerony ny fitsikilovana Maoritaniana. Zara raha miaina izy ireo, noho ny ny karama kely, ary tsy hisy hiraharaha akory izy ireo aorian'ny fahafatesany.
Fanodikodinam-bola sy harena no mba hain'ireo Jeneraly lehiben'ny fitsikilovana ; henjana dia henjana ny famehezana ataon'izy ireo, ary manana toe-tsaina tia mifehifehy izy ireo, ratsy toetra ihany koa.
Nanoratra i Mohamed Ould Jedou, olona mafana fo iray:
Miantso ireo tsy manan-kohanina ny mpitondra efa nahazo fahafaham-po ary milaza izy fa mila azy ireo ny firenena. Mitarika azy ireo any amin'ny fahafatesana izany ka ny karandohan'izy ireo no ampiasainy atao fitaovana fanaingoana ny tratrany. Inona daholo re izany tsy fahamarinana sy tsy rariny izany e?
Nanao tweet lava dia lava mikasika io tranga io indray koa ny mpikatroka Ahmed Ould Abdallah, olona mafana fo iray, hoy izy nanoratra:
Namono ny zanakay lahy ny Al Qaeda , ary ny jeneralinay dia mandany ny aliny miaraka amin'ireo mpivarotena
Io olona mahonena io, dia olo-tsotra novonoina tany amin'ny sisintany taorian'ny famotorana azy, nambanana basy izy ka nilaza ny marina rehetra tamin'ny Al Qaeda.
Nanakiana ny Maoritaniana ihany koa i Ahmed Ould Abdallah noho izy ireo niditra tamin'ny ady sy fifandirana ho amin'ny tombontsoan'ilay filoham-pirenena frantsay teo aloha antsoina hoe Sarkozy:
Tsy sahy nanao sorona ny ain'ny olony i Sarkozy. Tadidiny tsara ilay Jeneraly Aziz [filoham-pirenen'i Maoritania] tezitra mafy taminy, ka niantsy ady izay tsy nisy nidiran'ny Maoritaniana na kely aza.
18 ora izayAzia Afovoany sy Kaokazy